မိန်းမ ခိုးပြေးရာတွင် အားပေးကူညီခဲ့သူ တစ်ဦးအား မည်သို့မည်ပုံ လုပ်လိုက်သည်မသိ ထောင်တွင်း ထောင်ကျရက်၂ ရက်အတွင်း သေဆုံး - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ဖြစ်ရပ်မှန် / မိန်းမ ခိုးပြေးရာတွင် အားပေးကူညီခဲ့သူ တစ်ဦးအား မည်သို့မည်ပုံ လုပ်လိုက်သည်မသိ ထောင်တွင်း ထောင်ကျရက်၂ ရက်အတွင်း သေဆုံး
မိန်းမ ခိုးပြေးရာတွင် အားပေးကူညီခဲ့သူ တစ်ဦးအား မည်သို့မည်ပုံ လုပ်လိုက်သည်မသိ ထောင်တွင်း ထောင်ကျရက်၂ ရက်အတွင်း သေဆုံး
Apann Pyay 12:56 PM ပြည်တွင်းသတင်း , ဖြစ်ရပ်မှန် Edit
မိန်းမ ခိုးပြေးရာတွင် အားပေးကူညီခဲ့သူ တစ်ဦးအား မည်သို့မည်ပုံ လုပ်လိုက်သည် မသိ ကသာ အကျဉ်း ထောင်တွင် ထောင်ကျရက် ၂ ရက်အတွင်း သေဆုံး
ကသာမြို့ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်
သည့် မောင်ဇွဲမော်ဦး (ခ) ခေါင်းကြီး
(ဘ.. ဦးမောင်ဦး + ဒေါ်သိန်းဌေး )
သည် (7.6 .2017) ရက် နေ့နံနက်ပိုင်းက ကသာ အကျဉ်းထောင်မှာ သေဆုံးခဲ့ပါတယ် ။
ဖြစ်စဉ်မှာ သူငယ်ချင်း သော်ဇင်ဦး ၏ ချစ်သူ မနှင်းဝတ်ရည် အသက် (၁၇) နှစ်ကို ခိုးပြေးခဲ့ရာ ကောင်မလေးရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူမှ ကသာမြို့မ ရဲစခန်းမှာ တိုင်တန်းထားခဲ့တဲ့အတွက် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ (ပ) ၁၇၄/၂၀၁၇၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၆၆/၁၁၄ အရ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ် ။
(၄.၆.၂၀၁၇) ရက်နေ့ မနက် (၂း၃၀) နာရီခန့် သဖန်းကိုင်း အောက်ဖက် ကမ်းနားလမ်း ရေကာတာအဆုံး အကြော်ဆိုင်အနီးမှာ ဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူများ က ပြောပါတယ် ။
"ဖမ်းတာ (၄.၆၂၀၁၇) မနက် (၂း၃၀) ခန့်မှာရဲကားနဲ့ လူ ၄ ယောက် လာဖမ်းတာပါ ။ သခိုးသခိုး ဆိုပြီး ရိုက်နှက်နေတဲ့ အသံကို ကြားလို့ ရပ်ကွက်ထဲ က လူတွေ ထကြည့်ကြတာပါ ။
နောက်တော့ (ဖာသယ်မ) ၂ လို့ ဆဲဆိုပြီး
ကောင်မလေးကို ရိုက်တဲ့အသံကို ကြားရတဲ့အတွက် မကောင်းတာလုပ်လို့ ရဲ အဖမ်းခံရတာဆိုပြီး ဒီတိုင်း ကြည့်နေခဲ့တာပါ ။ ရဲတွေ က လဲ တော်တော်မူးနေပုံပေါက်ပါတယ် ။
နောက်တော့ ထောင်ထဲမှာ သေဆုံးသွားပြီလို့ သိ လိုက်ရတာပါ" ဟု ရပ်ကွက် (၁၀) မှ
မျက်မြင် တွေ့ရှိသူများ က ပြောပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ကသာအကျဉ်း ဦးစီး ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများအား သွားရောက်မေမြန်းရာ " ကျွန်တော်တို့ ထောင်ကို ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်က (၅.၆.၂၀၁၇ ) ညနေ ၅း၃၀ မှာရောက်ပါတယ် ။ ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာအရက်ကြောင်နေတဲ့ လဏ္ခဏာကိုတွေ့ရတယ်။ (၆ . ၆ .၂၀၁၇)ရက်နေ့ည (၉း၀၀) နာရီလောက်အထိ ဘာမှ မဖြစ်သေး ပါဘူး။ ၉း၀၀ နာရီထိုးပြီးရင် အားလုံးကို အိတ်ခိုင်းပါတယ် ။ အဲဒီနောက်မှာ အရက်ကြောင်ပြီး အော်ဟစ်ဆူ နေတဲ့အတွက် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းက အနည်းငယ် ရိုက်တာရှိ
တယ် ။ ကျွန်တော့်ဆီတော့ သတင်းလာမပို့ပါဘူး ။ မနက်ပိုင်း ရောက်မှ သေသွားပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတာပါ ။ ဒါကိုလဲ မှုခင်း ဆရာဝန်တွေနဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ် ။
စစ်ဆေးမပေါ်ပေါက်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမှာပါ " ဟု အကျဉ်းဦးစီး ဌာနမှ တာဝန် ရှိသူတစ်ဦး က ပြောပါတယ် ။
ထိုကဲ့သို့ ဇွဲမော်ဦး(ခ) ခေါင်းကြီး အနေနှင့်
ထောင်ထဲတွင် သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်အပေါ်
ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည့် ရဲ
တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကသာ အကျဉ်း ထောင်ထဲ မှ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးပိုင်း တာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့်အား (နှောင်ကို ယခုလို အဖြစ်မျိုး မဖြစ်ပေါ်စေရေး) စီစစ်ပြီး ပြစ်မှု ပြစ်ဒဏ် မျှတအောင် ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်း သေဆုံးသူ ၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးမောင်ဦး မှ ရင်ဖွင့် ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
ဇွဲမော်ဦး သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်အပေါ် ပြစ်မှု ပြစ်ဒဏ်မျှတရေး အဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်ရေး တောင်းဆိုခဲ့သည့် ကသာ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင်
အခြားသော ပြစ်မှုများနဲ့ ရောက်ရှိနေသော ကသာ သား (၅) ဦးကို လည်း တိုက်ပိတ်ခြင်း ခံလိုက်ရပြီး ၄င်းတို့ ကို ရုံးထုတ်ရာတွင်လည်း မိသားစု နှင့် တကွ တွေ့ဆုံခွင့် မပေးကြောင်း ၊ ထို့အပြင် သေဆုံးသူ၏ မိဘများထံ ထောင်ဝန်ထမ်း ရဲဝန်ထမ်းများမှ လာရောက်တွေ့ဆုံပြီး အားပေးနှစ်သိမ့်မှု တစုံတရာ မရှိကြောင်း တို့ကို နောက်ဆက်တွဲ အနေနှင့် စုံစမ်း သိရှိရ ကြောင်းပါခင်ဗျာ . . . ။
ကသာ မီဒီယာ ဂရု
မိနျးမ ခိုးပွေးရာတှငျ အားပေးကူညီခဲ့သူ တဈဦးအား မညျသို့မညျပုံ လုပျလိုကျသညျ မသိ ကသာ အကဉျြး
ထောငျတှငျ ထောငျကရြကျ ၂ ရကျအတှငျး သဆေုံး
ကသာမွို့ အမှတျ(၄)ရပျကှကျတှငျ နထေိုငျ
သညျ့ မောငျဇှဲမျောဦး (ခ) ခေါငျးကွီး
(ဘ.. ဦးမောငျဦး + ဒျေါသိနျးဌေး )
သညျ (7.6 .2017) ရကျ နနေံ့နကျပိုငျးက ကသာ အကဉျြးထောငျမှာ သဆေုံးခဲ့ပါတယျ ။
ဖွဈစဉျမှာ သူငယျခငျြး သျောဇငျဦး ၏ ခဈြသူ မနှငျးဝတျရညျ အသကျ (၁၇) နှဈကို ခိုးပွေးခဲ့ရာ ကောငျမလေးရဲ့ မိခငျဖွဈသူမှ ကသာမွို့မ ရဲစခနျးမှာ တိုငျတနျးထားခဲ့တဲ့အတှကျ ပွဈမှုဆိုငျရာ ဥပဒေ ပုဒျမ (ပ) ၁၇၄/၂၀၁၇၊ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၆၆/၁၁၄ အရ ဖမျးဆီးခွငျး ခံခဲ့ရပါတယျ ။
(၄.၆.၂၀၁၇) ရကျနေ့ မနကျ (၂း၃၀) နာရီခနျ့ သဖနျးကိုငျး အောကျဖကျ ကမျးနားလမျး ရကောတာအဆုံး အကွျောဆိုငျအနီးမှာ ဖမျးမိခဲ့တာဖွဈကွောငျး မကျြမွငျတှရှေိ့သူမြား က ပွောပါတယျ ။
"ဖမျးတာ (၄.၆၂၀၁၇) မနကျ (၂း၃၀) ခနျ့မှာရဲကားနဲ့ လူ ၄ ယောကျ လာဖမျးတာပါ ။ သခိုးသခိုး ဆိုပွီး ရိုကျနှကျနတေဲ့ အသံကို ကွားလို့ ရပျကှကျထဲ က လူတှေ ထကွညျ့ကွတာပါ ။
နောကျတော့ (ဖာသယျမ) ၂ လို့ ဆဲဆိုပွီး
ကောငျမလေးကို ရိုကျတဲ့အသံကို ကွားရတဲ့အတှကျ မကောငျးတာလုပျလို့ ရဲ အဖမျးခံရတာဆိုပွီး ဒီတိုငျး ကွညျ့နခေဲ့တာပါ ။ ရဲတှေ က လဲ တျောတျောမူးနပေုံပေါကျပါတယျ ။
နောကျတော့ ထောငျထဲမှာ သဆေုံးသှားပွီလို့ သိ လိုကျရတာပါ" ဟု ရပျကှကျ (၁၀) မှ
မကျြမွငျ တှရှေိ့သူမြား က ပွောပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ ကသာအကဉျြး ဦးစီး ဌာနမှ တာဝနျရှိသူမြားအား သှားရောကျမမွေနျးရာ " ကြှနျတျောတို့ ထောငျကို ရောကျခဲ့တဲ့အခြိနျက (၅.၆.၂၀၁၇ ) ညနေ ၅း၃၀ မှာရောကျပါတယျ ။ ရောကျလာတဲ့ အခြိနျမှာအရကျကွောငျနတေဲ့ လဏ်ခဏာကိုတှရေ့တယျ။ (၆ . ၆ .၂၀၁၇)ရကျနညေ့ (၉းဝဝ) နာရီလောကျအထိ ဘာမှ မဖွဈသေး ပါဘူး။ ၉းဝဝ နာရီထိုးပွီးရငျ အားလုံးကို အိတျခိုငျးပါတယျ ။ အဲဒီနောကျမှာ အရကျကွောငျပွီး အျောဟဈဆူ နတေဲ့အတှကျ စညျးကမျးထိနျးသိမျးရေးပိုငျးက အနညျးငယျ ရိုကျတာရှိ
တယျ ။ ကြှနျတေျာ့ဆီတော့ သတငျးလာမပို့ပါဘူး ။ မနကျပိုငျး ရောကျမှ သသှေားပွီဆိုတာ သိလိုကျရတာပါ ။ ဒါကိုလဲ မှုခငျး ဆရာဝနျတှနေဲ့ စဈဆေးမှုတှေ ပွုလုပျနပေါတယျ ။
စဈဆေးမပျေါပေါကျပါက ဥပဒအေရ အရေးယူသှားမှာပါ " ဟု အကဉျြးဦးစီး ဌာနမှ တာဝနျ ရှိသူတဈဦး က ပွောပါတယျ ။
ထိုကဲ့သို့ ဇှဲမျောဦး(ခ) ခေါငျးကွီး အနနှေငျ့
ထောငျထဲတှငျ သဆေုံးခဲ့တဲ့ ဖွဈစဉျအပျေါ
ရိုကျနှကျ ဖမျးဆီး ချေါဆောငျသှားခဲ့သညျ့ ရဲ
တပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ ကသာ အကဉျြး ထောငျထဲ မှ စညျးကမျး ထိနျးသိမျးရေးပိုငျး တာဝနျရှိသူ အဆငျ့ဆငျ့အား (နှောငျကို ယခုလို အဖွဈမြိုး မဖွဈပျေါစရေေး) စီစဈပွီး ပွဈမှု ပွဈဒဏျ မြှတအောငျ ဆောငျရှကျပေးစလေိုကွောငျး သဆေုံးသူ ၏ ဖခငျဖွဈသူ ဦးမောငျဦး မှ ရငျဖှငျ့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ ။
ဇှဲမျောဦး သဆေုံးခဲ့တဲ့ ဖွဈစဉျအပျေါ ပွဈမှု ပွဈဒဏျမြှတရေး အဖွဈမှနျပျေါပေါကျရေး တောငျးဆိုခဲ့သညျ့ ကသာ အကဉျြးထောငျထဲတှငျ
အခွားသော ပွဈမှုမြားနဲ့ ရောကျရှိနသေော ကသာ သား (၅) ဦးကို လညျး တိုကျပိတျခွငျး ခံလိုကျရပွီး ၄ငျးတို့ ကို ရုံးထုတျရာတှငျလညျး မိသားစု နှငျ့ တကှ တှဆေုံ့ခှငျ့ မပေးကွောငျး ၊ ထို့အပွငျ သဆေုံးသူ၏ မိဘမြားထံ ထောငျဝနျထမျး ရဲဝနျထမျးမြားမှ လာရောကျတှဆေုံ့ပွီး အားပေးနှဈသိမျ့မှု တစုံတရာ မရှိကွောငျး တို့ကို နောကျဆကျတှဲ အနနှေငျ့ စုံစမျး သိရှိရ ကွောငျးပါခငျဗြာ . . . ။